August 28, 2015 – Tharu Community
केहि थारूले नबुझेको कुरा : अहिले थारू आन्दोलन किन भैरहेको छ? अरूको माग प्रदेश छुटाएरै दुई दिनमै सम्बोधन गर्ने यो … More केहि थारूले नबुझेको कुरा : अहिले थारू आन्दोलन किन भैरहेको छ? अरूको माग प्रदेश छुटाएरै दुई दिनमै सम्बोधन गर्ने यो शासक वर्गले थारूको माग 15औं दिनसम्म आन्दोलन चलिरहदा पनि किन सम्बोधन गर्न मानिरहेको छैन? →
केहि थारूले नबुझेको कुरा : अहिले थारू आन्दोलन किन भैरहेको छ? अरूको माग प्रदेश छुटाएरै दुई दिनमै सम्बोधन गर्ने यो शासक वर्गले थारूको माग 15औं दिनसम्म आन्दोलन चलिरहदा पनि किन सम्बोधन गर्न मानिरहेको छैन? August 28, 2015 0No comments on केहि थारूले नबुझेको कुरा : अहिले थारू आन्दोलन किन भैरहेको छ? अरूको माग प्रदेश छुटाएरै दुई दिनमै सम्बोधन गर्ने यो शासक वर्गले थारूको माग 15औं दिनसम्म आन्दोलन चलिरहदा पनि किन सम्बोधन गर्न मानिरहेको छैन?